ဆို - လေးဖြူ ၊ ဟယ်ရီလင်း ၊ မျိုးကြီး ၊ ဆုန်သင်းပါရ်
အမေပျောက်လို့လိုက်ရှာ ကလေးငယ်ပေါင်းများစွာ ငိုကြွေးလို့ဟစ်အော် မိခင်ကြားနိုင်ပါ့မလား
သန်းခေါင်ယံညရဲ့ ဆုတောင်းများစွာ ပြည့်ဝခွင့်ဟာ အားလုံးရဲ့ အဖြေလား (အူး.. အားလုံးရဲ့အဖြေလား)
(လေးဖြူ) ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ တို့ဘ၀တွေ အတူပြန်လည်တည်ဆောက်ကြမယ် အနွေးထွေးဆုံးဒီအချစ်များနဲ့ အူး..
(မျိုးကြီး) ရင်ဆိုင်ကြဖို့ လက်တွေ အတူ.. တွဲထား အိုး ဘ၀တွေ တစ်ခေါက်ပြန်လှစေဖို့ အတူတူဖြစ်စေရမယ် တို့ရဲ့လက်များနဲ့ (လက်များနဲ့)
မင်း.. အချစ်နဲ့လက်များ ပေးလိုက်ပေါ့ ဘ၀များစွာ ရှင်သန်ဖို့ အခွင့်တွေဟာ ကူညီသူကို စောင့်စား
အချစ်.. ကမ်းမယ့်လက်များ ၀မ်းနည်းမှု အိမ်ထဲ ကြေကွဲ ရေထဲ (အူး အချစ်နဲ့ဘ၀တွေ နာကြင်ခြင်း)
အချစ်.. ကမ်းမယ့် (တို့လက်များ) လက်များ ၀မ်းနည်းမှု အိမ်ထဲ ကြေကွဲ ရေထဲ နာကြင်အဖေါ်မဲ့ ဘ၀တွေ
မှတ်ချက် ။ ။ လင်းလက်ကြယ်စင် ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း။
Filed Under : Song
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော့် ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ ခင်ဗျာ
Here is my site; www.mtwebit.com
my blog post - http://camillacastro.cn/community/index.php?p=blogs/viewstory/135155
Feel free to surf to my web blog :: http://Ukhuwah.bemfkunsyiah.net/
Feel free to visit my web page - http://aydinayhan.nl
I just could not depart your website prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard infoaperson provide for your
visitors? Is going to be back often in
my site; tekbilim.com
My web page website.kamsgraphics.com
came to “go back the desire”.I am trying to find things to improve my website!
my web site http://creativus.lv/index.php?option=com_blog&view=comments&pid=35506&Itemid=0
my blog ... Friendshareinc.com
my webpage :: Peoplesmouth.com
I've been browsing on-line more than three hours nowadays, yet I by no means discovered any fascinating article like yours. It is beautiful price enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content as you probably did, the internet can be much more helpful than ever before.
Feel free to visit my blog post ... natura benissa